ကယ်တင်ရှင်၏အောင်ပွဲ! | The Saviour’s Triumph! | Real Conversion
(ဟေရှာယ ၅၃ထဲက ၁၂ ခုမြောက်သော ဒေသနာတော်)
(SERMON NUMER 12 ON ISAIAH 53)
၂၀၁၃၊ ဧပြီလ ၁၄ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ မနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်။ အသက်တော်လည်း ရှည်လိမ့်မည်။ ထာ၀ရဘုရား၏ အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
ဟေရှာယ ၅၃း၁၀၏ပထမအပိုင်းတွင် ခရစ်တော်သည် အပြစ်ဖြေသောယဇ်ကောင်ကဲ့သို့ အသေခံ သွားမည်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျန်သောအပိုင်းကို ယနေ့ညဟောကြားပါမည်။ ကျမ်းပိုဒ်၏ ပထမပိုင်းတွင် သားတော်ခံစားရသောနာကျင်ခြင်း ဝေဒနာ၏ဇစ်မြစ်သည် ခမည်းတော်ဘုရား သခင်ပြုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဒေါက်တာမေရယ်အက်ဖက် ပြောကြားသည်မှာ၊ “ဘုရားသခင်သည် သားတော်အားအမှုန့်ချေနာကျင်စေခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်” (Merrill F. Unger, Ph.D., Unger's Commentary on the Old Testament, Moody Press, 1981, volume II, p. 1299). ဟေရှာယ ၅၃း၁၀ ၏ပထမပိုင်း၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်မူ၏။ သူသည်အပြစ် ဖြေသောယဇ်ကို ပူဇော်ပြီးမှ” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
ကီးလ်နှင့်ဒေလက်ချက်စ်၏ ဓမ္မဟောင်းအနက်ပြန်ကျမ်း၌ ဖော်ပြထားသည်မှာ၊
လူသားတို့သည် (ခရစ်တော်) အပေါ်သို့ နာကျင်စေခြင်း၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခဲ့ကြသည်။ အ မမြင့်မတ်ဆုံးသော ဘုရားသခင်က လူတို့အားသူ့၏အလိုတော်ကို ဆောင်ဖို့ရန်အပြစ်သင့်စေခဲ့ သည်။ (Eerdmans, 1973 reprint, vol. VII, part II, p. 330).
သို့သော် ဟေရှာယ ၅၃း၁၀၏ဒုတိယပိုင်းတွင် ခရစ်တော်၏ဝေဒနာခံစားခြင်းဖြင့် မည်သည့်ရလဒ် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခံစားကြသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ပြင်းထန်သော ဝေဒနာနှင့်သေခြင်းက၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်လာသည်! ကျေးဇူးပြု၍ ကျမ်းပိုဒ်၏ဒုတိယအပိုင်းကို “မျိုးနွယ် တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်” ဟူသော နေရာကစ၍ ဖတ်ကြားကြပါစို့။
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ခရစ်တော်၏ဝေဒနာတော်ထဲမှ အကျိူးရလဒ်သုံးခု ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
၁။ ပထမ၊ မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်။
“မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
ဤသည်ကား ယေရှုအသေခံရခြင်း၏ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည်။ “မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်” ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ရေးရာ ဆွေမျိုးထံသို့ချဉ်းကပ်ကြမည်၊ သူ၏ “မျိုးနွယ်”ဖြစ်ကြမည်။ ယေရှုကြို တင်၍ မိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ထိုအခါ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာက လာ၍ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲတွင် လှောင်းရကြလတံ့” (လုကာ ၁၃း၂၉)။
ပင်တေဂုတ္တေပွဲကစပြီး မရေတွက်နိုင်သော အရပ်ရပ်ကလူတို့သည် ခရစ်တော်ထံသို့ ပြောင်းလဲ လာကြသည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့တွင် ခရစ်တော်သည် တဖန်ပြန်လာအုံးမည်ဖြစ်သည်။
“သူ၏မျိုးနွယ်သည်လည်း ပြည်တော်ကို အမွေခံလိမ့်မည်” (ဆာ ၂၅း၁၃)။
ခရစ်တော်သည် သူ၏မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်တွေ့ရဖို့စောင့်မနေတော့ပါ။ ချက်ချင်းပင်၊ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းကို အောင်မြင်၍ ရှင်ပြန်ထမြောက်aသောနေ့၌ပင် သူ၏မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်တွေ့ရပြီ။ မျိုးနွယ်တော်တို့သည်လည်း ကိုယ်တော်ကိုမြင်တွေ့ကြရပြီ! တမန်တော်ရှင်ပေါလုက မိန့်တော်မူ သည်၊
“ကေဖသည် ကိုယ်တော်ကိုမြင်ပြီးမှ၊ တစ်ကျိပ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည် မြင်ရကြ၏။ ထို့ နောက်ညီအစ်ကိုငါးရာမက တစ်ပြိုင်နက်မြင်ရကြ၏၊ ထိုနောက်တမန်တော် အပေါင်းတို့ သည် မြင်ရကြ၏။ နောက်ဆုံး၌ အချိန်မတော်မတန် ဖွားသောသူကဲ့သို့ ဖြစ်သော ငါပင်မြင် ရ၏” (၁ကော ၁၅း၅-၈)။
သူ၏မျိုးနွယ်တော်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြ၏။
ကိုယ်တော်သည် သူ၏မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ခဲ့ပြီ။
“ယေရှုသည် ရူအးကလာ၍ အလယ်မှာရပ်တော်မူလျှက်၊ သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်း ရှိစေသတည်း ဟုမိန်တော်မူ၏။ ထိုသို့မိန့်တော်မူပြီးမှ လက်တော်နှင့်နံဘေးတော်ကို ပြတော်မူ၏။ တပည့် တော်တို့သည် သခင်ကိုမြင်လျှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏” (ယောဟန် ၂ဝး၁၉-၂၀)။
မျိုးနွယ်တော်သည် ကိုယ်တော်ကို မြင်တွေ့ကြသည်။ ကိုယ်တော်သည်လည်း သူ၏မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်တွေ့ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏မျိုးနွယ်တော်ဖြစ်ကြသည်! ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်၊ သူ၏မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ခဲ့သည်!
ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရူအးကသွားတော်မူပြီးနောက်၊ သန်းရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား ဖြင့် လူပေါင်းသုံးထောင်ကျော် အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ပရောဖက်ဧလိယအားဖြင့် ပြုထား သောပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ဘုံမှယေရှုသည် သူ၏မျိုးနွယ်တော်များ ကို ကြည့်ရှုနေပါသည်။ တမန်တော်ဝတ္တုကျမ်း၌ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးဖြစ် သော ခရစ်တော်သည် ဘုန်းတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသောကောင်းကင်ပလ္လင်က သူ့အားကိုးစားယုံကြည် သောမျိုးနွယ်တော်တို့အား ကြည့်ရှုနေပါသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် ထိုသို့ပြောင်းလဲလာသောသူ၏မျိုးနွယ်တော်ကို ယေရှုသည်ကြည့်ရှုနေသည်။ ကမ္ဘာတစ်လွားကူးခတ်သွားလာနေကြသော သူ၏လူတို့ကို ယေရှုသည် ကောင်းကင်ဘုံက ကြည့်ရှု နေပါသည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ ပရောဖက်စကားအတိုင်း၊ “အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာက လာ၍ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ထဲတွင် လှောင်းရကြသည်” (လုကာ ၁၅း၂၉)။
သင်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုထံချည်းကပ်သောအခါ ကိုယ်တော်သည်သင့်အား ကြည့်ရှု တော်မူမည်! ထိုအသက်တာပြောင်းလဲစဉ်ခဏတွင် သင်သည်ကိုယ်တော်၏မြေကြီးပေါ်က မျိုးနွယ် တော်၊ ကောင်းကင်ဘုံကမျိုးနွယ်တော် အများစုထဲသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံသောဘုန်း တော်ထဲ ဝင်စားကြရသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံသော လူယောကျာF;၊ လူမိန်းမတို့သည် ကိုယ် တော်နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြရပါလိမ့်မည်! အမှန်ပင်ခံစားရမည်။
ကျွန်ုပ်နှင့်ဇနီးတို့သည် မမျော်လင့်ဘဲ ဒီဗွီဒီပြားကို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အီရန်နိုင်ငံမွတ်ဆလင် လူမျိုးများ တယောက်ပြီးတစ်ယောက် ခရစ်တော်ထံသို့ ပြောင်းလဲနေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အီရန် နိုင်ငံ၌ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က “ကျွန်မသည် မျော်လင့်ချက်မဲ့လျှက် ပျောက်နေပြီ” ဟုဆို၏။ ထို့နောက်သူသည် ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်လာခဲ့ပါသည်။ လူငယ်တစ်ဦးကလည်း “မွတ်ဆလင်တဦး ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူး” ဟုပြောဆို၏။ သူသည်လည်း ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီး ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာ ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀နောက်ပိုင်းတွင် အီရန်နိုင်ငံ၌ အချိန်နှင့်အမျှအသက်တာ ယေရှု၌ အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်! ယေရှုသည် သူ၏”မျိုးနွယ်တော်”ကို ကြည့်ရှုနေပါသည်။ မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာက သူ၏မျိုးနွယ်တော်ကို ကြည့်ရှုနေပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဒေသနာတော်သည်လည်း ဝက်ဆိုဒ်မှတဆင့် အာရမိဘာသာစကားဖြင့် ထိုနေရာဒေသဆီသို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်!
ထို့နောက်အောင်မြင်ခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်သည် ဘုန်းတန်ခိုးတော်အားဖြင့် သူ၏နိုင်ငံတော်ကို ဤလောက၌ တည်ထောင်ဦးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည်ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်၊ အရှင် တကာတို့၏အရှင်၊ ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
“ထိုသူသည် ကိုယ်တိုင်ကောင်းမွန်ခြင်း၌ ကိန်းဝပ်၍သူ၏မျိုးနွယ်သည်လည်း ပြည်တော်ကို အမွေခံရလိမ့်မည်” (ဆာ ၂၅း၁၃)။
ကိုယ်တော်သည် “သူ၏မျိုးနွယ်ကိုမြင်လိမ့်မည်” ကိုယ်တော်ဘုရား၏နုတ်တော်မှ မိန့်တော်မူပြီးဖြစ် သည်။ “ယေရှုစိုးစံတော်မူပြီ” ဓမ္မသီချင်းသီဆိုသည်။
(၁၆၇၈-၁၇၄၈၊ အီဇက်ဝတ်ဒီဒီ သီကုံးသော “ယေရှုစိုးစံမူပြီ”)။
၂။ ဒုတိယ၊ အသက်တော်လည်းရှည်လိမ့်မည်!
ရွှေကျမ်းချက်ဖြစ်သော ဟေရှာယ၅၃း၁၀ကို ပြန်ကြည့်သောအခါ ယေရှုဝေဒနာသေခြင်း အားဖြင့် ကြီးမားသောအကျိုးကျေးlဇူးကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
“မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်။ အသက်တော်လည်း ရှည်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
ခရစ်တော်အသေခံရခြင်း၏ဒုတိယရလဒ်ကား၊ “အသက်တော်လည်းရှည်လိမ့်မည်။ ကားတိုင်ပေါ်အ သေခံသော်လည်း အသက်တော်သည် နိဂုံးချုပ်သွားခြင်းမရှိပါ။ သချိုFင်း၌ ကြာကြာအလောင်းတော်ကို ထား၍ မဖြစ်ပေ။ တတိယနေ့ရောက်သောအခါ ယေရှုသည် အောင်မြင်ခြင်းဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက် တော်မူခဲ့ပါသည်။ မှောင်မိုက်သံကြိုးချည်နောင်ခြင်းမှ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘယ်တော့မှ သေခြင်း မရှိတော့ပေ! “ခရစ်တော်သည် အသေခံတော်မူရာတွင်၊ အပြစ်တရာကြောင့်တကြိမ်သာ ခံတော်မူ၏။ အသက်ရှင်တော်မူရာတွင် ဘုရားသခင်အဖို့ရှင်တော်မူ၏” (ရောမ ၆း၁၀)။ ဘယ်တော့မှ သေခြင်းမရှိ တော့ပြီ!
“သေခြင်းတရားသည် နောက်တဖန်ကိုယ်တော်ကို မအုပ်စိုးရသည်ကို ထောက်သော်” (ရောမ ၆း၉)။
ဟာလေလုယာ! ဟာလေလုယာ! ဟာလေလုယာ!
ရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး (၁၈၃၂-၁၉၀၉ ခုနှစ်၊ ဖရန့်စီပေါက
ဘာသာပြန်ဆိုသော “ရန်သူကို အောင်မြင်ကျူး”)။ “အသက်တော်သည် ရှည်လိမ့်မည်”
“နိစ္စထာ၀ရတည်သောကြောင့် . . . သူတို့ကို အစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှါ တတ်နိုင်တော်မူ၏”(ဟေဗြဲ ၇း၂၄-၂၅)။
စပါဂျန်ပြောကြားသည်မှာ၊ ဤလောက၌ရှိကြသော သူ၏မျိုးနွယ်တော်ကို ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံက ကြည့်ရှုတော်မူသည်။ နွေရာသီ၌ ကောင်းကင်ကြယ်များကို မရေမတွက်နိုင်အောင် တွေ့မြင်ဘိသကဲ့သို့ ၎င်းမျိုးနွယ်တော်ကို ကိုယ်တော်ကြည့်ရှုတော်မူပါသည်”။ (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume 51,p. 565).
“မျိုးနွယ်တော်ကိုလည်း မြင်ရလိမ့်မည်။ အသက်တော်သည်လည်း ရှည်လိမ့်မည်”(ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
၃။ တတိယ၊ ထာ၀ရဘုရား၏ အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ပြည့်စုံမည်။
ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက်၊ ကျမ်းတစ်ပိုဒ်လုံးကို ဖတ်ကြပါစို့၊ နောက်ဆုံးတစ်ပိုဒ်ဖြစ် သော “ထာ၀ရဘုရား၏အကြံတော်” ဟူသော စာပိုဒ်ကို အာရုံစိုက်ပြီးဖတ်ကြပါစို့။
“မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်၊ အသက်တော်လည်းရှည်လိမ့်မည်။ ထာ၀ရဘုရား၏အကြံ တော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” (ဟေရှာ ၅၃း၁၀)။
၎င်းသည် ယေရှုအသေခံခြင်း၏ အကျိူးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ “ထာ၀ရဘုရား၏အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” စပါဂျန်ပြောကြားသည်မှာ၊
သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသည်မှာ၊ ၁၉ရာစုနှစ်ပင် ကျော်လွန်လာပါပြီ။ ကိုယ်တော် အသက်ရှင်နေပါသည်။ ကိုယ်တော်ဤလောက၌ အသက်ရှင်သွားသကဲ့သို့ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခမည်းတော်ထံသို့ ရူအးကသွားတော်မူပြီဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ထာ၀ရအသက်ရှင်နေသည် “ကိုယ်တော်၏ရာဇပလ္လင်သည် နိစ္စထာ၀ရတည်၏” တောင်ကြီးတို့သည်ရွှေ့၍၊ ကောင်းကင် လိပ်သွားသော်လည်း သင်၏ရာဇပလ္လင်သည် နိစ္စတည်၏” (Spurgeon, ibid).
“ထာ၀ရဘုရား၏အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်”(ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
ထာ၀ရဘုရား၏အလိုတော်၊ ရည်ရွှယ်ချက်သည် “သူ၏လက်၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” ဟု ခမည်းတော်သည် သားတော်အား မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
“ထိုမျှမက သင်သည် မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင် ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းကို ပြုစိမ့်သောငှါ၊ သင့်ကို တပါးအမျိုးတို့ လင်းစရာအဖို့ ငါခန့်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏” (ဟေရှာ ၄၉း၆)။
“တပါးအမျိုးတို့သည် သင်၏အလင်းသို့၎င်း . .တပါးအမျိုး၏စည်းစိမ်သည် သင့်လက်သို့ ရောက်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၆ဝး၃-၅)။
“ကြည့်ရှုလော့။ ဤသူတို့သည် ဝေးသောအရပ်မှလာကြလိမ့်မည်၊ ကြည့်ရှုလော့ သူတို့သည် မြောက်မျက်နှာနှင့် အနောက်မျက်နှာမှ၎င်း၊ ထိုသူတို့သည် သိနိမ်ပြည်မှ၎င်း လာကြလိမ့် မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ဟေရှာယ ၄၉း၁၂)။
“ထာ၀ရဘုရား၏အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)။
လွန်ခဲ့သောလက မာတုရအော်သံအဖွဲ့က ဖြန့်ချိသောတရုတ်ပြည်နှင့် ပါတ်သတ်၍ ဗွီဒီယိုကို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ တရုတ်အမျိုးသား မောဇက်ခီ၏ သက်သေခံတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ “ယဉ်ကျေး မှုအသွင်ပြောင်းကာလ”၌ ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိသတင်းဟောကြား၍ ကွန်မြူနစ်ထောင် ထဲ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ ယေရှု၏အသံတော်က “ငါ့သား ငါ့ကျေးဇူးက သင့်အဖို့ လောက်ပေပြီ”ဟု နှလုံးသားထဲစကားပြောသံကို ကြားခဲ့ရသည်။ မစ္စတာခီက ထိုအသံကို နှလုံးသားထဲ ၌ သုံးကြိမ်ကြားခဲ့ရသည်။ တတိယအကြိမ် “ငါ့သား ငါ့ကျေးဇူးသင့်အဖို့လောက်ပေပြီ” ဟူသောအသံ ကိုကြားရသောအခါ မျက်ရည်မဆယ်နိုင်အောင် ကျလာမိပါတယ်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမျက်ရည်ကျလာ သည် အကြောင်းမှာ ကွန်မြူနစ်ထောင်ထဲက ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်မည်ကို သိ နေ၍ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်၎င်းဗွီဒီယိုက ထောင်နှင့်ချီသော တရုတ်ကွန်မြူနစ်သမားများ မော်စီတုန်းကို ကိုးကွယ် ပန်နေသည်ကို ပြနေပါသည်။ မော်စီတုန်းသည် ကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဟစ်တလာထက် ပင် လူသားများစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ လူထုပရိတ်သတ်များ မော်စီတုန်းက ဦးချဝတ်ပြုနေ စဉ် ကျွန်ုပ်၌အတွေးတစ်ခုဝင်လာသည်မှာ၊ “ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများသည် ကောင်းကင်ဘုံ တွင်ရှိနေကြမည်၊ မင်းတို့ကွန်မြူနစ်သမားတို့က ပျောက်ကွယ်သွားကြမှာပဲ” ဟူသောအတွေးပင် ဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ်သမားတို့သည် အရိုးပြာပုံသာရှိနေကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်တို့မူကား၊ ထို ကောင်းကင်အရပ်၌ ရောက်ရှိကြရမည်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များသည် တိုးသထက်တိုးပွား လာမည်။ ခရစ်တော်၏ရန်သူတို့ကား၊ ဘယ်နေရာ၌ရောက်ရှိကြမည်နည်း? ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် မှာ၊ “ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကန်မြူနစ် သမားတို့မူကား၊ ပျောက်လွင့်ကြပါမည်” “ထာ၀ရဘုရား၏အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ ပြည့်စုံလိမ့်မည်”!
ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများသည် လောကီလူသားတို့၏မုန်းတီးခြင်းကို ခံရကြမည်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ရှင်လည်း ဤလောက၌ အသက်ရှင်စဉ် သရော် ပြောင်လှောင်ခြင်းခံရသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ လည်း သရော် ပြောင်လှောင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှအောင် ပြီးဖြစ်သည်။ “ထာ၀ရဘုရား၏အကြံတော်သည် သူ၏လက်၌ပြည့်စုံလိမ့်မည်” သူ၏လက်၌ထာ၀ရ ဘုရား၏အကြံတော်ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်၍ မည်သို့ပင်လောကီလူသားတို့က ပြောင်လှောင်စေကာမူ ဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်တော့ပါ။ အဆုံးတွင်၊
“လောကီနိုင်ငံသည် ငါတို့အရှင်၏နိုင်ငံဖြစ်လေပြီ။ ထိုအရှင်၏ခရစ်တော်နိုင်ငံဖြစ်လေပြီ။ သူသည်လည်း ကမ္ဘာအဆက်ဆက် စိုးစံတော်မူမည်ဟု ပြောဆိုကြ၏” (ဗျာဒိတ် ၁၁း၁၅)။
ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျွန်ုပ်တို့ယေရှုကို တွေ့မြင်ကြရတော့မည်။ သေခြင်းကိုအောင်မြင်တော်မူပြီ။ “ထာ၀ရ ဘုရား၏အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ပြည့်စုံလိမ့်မည်” ဤကမ္ဘာလောကကြီးကို အုပ်စိုးဖို့ ယေရှုပြန်လာဦးမည်ဖြစ်သည်!
- သားတော်ဘုရား စိုးစုံတော်မူမည်
ရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး အောင်မြင်ခြင်းနှင့် ခရီးဆက်နေဆဲပင်
(၁၆၇၄-၁၇၄၈ အီဇက်ဝတ် ဒီဒီရေးသားသီကုံးသော “ယေရှုစိုးစံ”)။
ရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး လူတို့ငြင်းပယ်သော အရှင်သခင်
ရညဘျစးရညဘျစးရညဘျစး ဘုန်းတော်တန်ခိုးနှင့် ကိုယ်တော်ကြွလာ
(၁၈၇၁-၁၉၃၇ မာဘေလ်ဂျွန်စတုန်း ကန့်သီကုံးသော “ကိုယ်တော်ကြွလာ”)။
ယနေ့မနက်၊ ဤနေရာ၌ ရောက်လာကြသောမိတ်ဆွေများထဲက အချို့တို့သည် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြ မည်ကို ကျွန်ုပ်သိရပါသည်။ “ဤလူများမည်သည့်အရာအတွက် စိတ်အားကြီးကြသနည်း? ဟူ၍ အချို့တို့စဉ်းစားနေကြမည်။ ဘာကြောင့်ဤအရာကို လက်ခုတ်ဩဘာပေးကြသနည်း? ဤအသင်း တော်၌ တက်ရောက်ခဲ့ကြသော သူတို့သည် ထိုသို့သောခံစားချက် ရှိနေကြသည်ကို ကျွန်ုပ်အခိုင်အမာ ပြောရဲပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယခုကဲ့သို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြဦးမလား? ၎င်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ကြားသိရပြီဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားကြရသလဲ? ဘာကြောင့်အလွန်းအလွန် ဝမ်းမြောက် ကြသနည်း? ဒီလိုစိန်ခေါ်ချက်တွေကို သင်မလွန်ဆန်ဘူးမဟုတ်ပါလား?” ထိုသို့ ခံစားချက်မျိုး အချို့တို့ခံစားနေကြသည်ကို ကျွန်ုပ်သိပါသည်။ “ဘာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားကြသနည်း? ၎င်းသည် သင့်အဖို့ နက်နဲ့သောအရာပင်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုထဲ သင်ဝင်ရောက်လို့တော့ မရပါဘူး!
သင်တို့ ခံစားချက်ကောင်းနေတာ ကျွန်ုပ်သိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ဘက်စကတ်ဘော ပရိတ်သတ် တစ်ဦးလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘက်စကတ်ဘော ကစားနည်းကြောင့် ကျွန်ုပ်စိတ်မလှုပ်ရှားပါဘူး! ကျွန်ုပ် အတွက်တော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အငြီးငွေ့ဆုံးကစားနည်းတစ်ခုပါ။ သို့သော် အချို့သောသူတို့အဖို့တော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ ခြားနားချက်က ဘာတွေလဲ? ခြားနားချက်က ရိုးရှင်းပါတယ်၊ သင်ဟာ ဘက်စကတ်ဘော ပရိတ်တစ်ဦးမို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဘတ်စကတ်ဘောပရိတ်သတ် တစ်ဦးမဟုတ် ပါဘူး! ခြားနားချက်က ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင်က ဘက်စကတ်ဘောအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားပေမယ့်၊ ကျွန်ုပ်ကတော့ မခံစားတတ်ဘူးဗျာ။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်နှစ်ယောက်၏ခြားနားမှုကိုတော့ မလေ့လာတော့ပါ ဘူး၊ စိတ်ဝင်စားရခြင်း၏နောက်ခံသမိုင်း ရှိရမှာပေါ့ဗျာ။ ထူးခြားချက်ကိုတော့ မရှာဖွေတော့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ခံစားချက်ထဲ ကျွန်ုပ်ဝင်မရာက်နိုင်ခြင်းက ကျွန်ုပ်၏သဘောသဘာ၀ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ် ပေါဗျာ။
ခရစ်တော်၏အောင်မြင်ခြင်းလည်း ထိုနည်းတူစွာပဲဖြစ်တယ်။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ရူအးကလာခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ခံစားကြည့်ကြပေါ။ သင်စိတ်ဝင်မစားဘဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်၏ ပရိတ်သတ်ပါ။ သင်တို့က ခရစ်တော်၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်လို့ ပေါ! ခရစ်တော်၏အောင်မြင်ခြင်းကို သင်လက်တွေ့ခံစားနိုင်ဖို့ သင်၏သဘောသဘာ၀ ပြောင်းလဲဖို့ လိုတယ်လေ။ နုတ်ကပတ်တော်၌မိန့်တော်မူသည်ကား “ဇာတိပကတိလူသည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ် တော်အရာတို့ကို မခံမယူ။ ထိုအရာတို့သည် မိုက်မဲ့သောအရာဖြစ်သည်ဟု ထင်တတ်၏” (၁ကော ၂း၁၄)။ သင်သည် “ဇာတိပကတိ” လူဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ခရစ်တော်၏အောင်မြင်ခြင်းသည် အရေးကြီး သည်ဟု ထင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်စိတ်လှုပ်ရှားမည်လည်းမဟုတ်ပေ။ သင့်ဇာတိသဘောသည် ပြောင်းလဲ၍ ခရစ်တော်၏အောင်မြင်ခြင်း၌ စိတ်အားကြီးဖို့လိုပါသည်! သင်ဘ၀အသက်တာအသစ် တဖန်ပြောင်းလဲမှသာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားသကဲ့သို့ သင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်!
ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ခံစားနေသည်ကို သင်သိနေမှာပါ။ သို့သော် သင်ခံစားချက်ကို သင်ပြောင်းလဲ ယူလို့တော့မရနိုင်ပါဘူး! မည်သို့ပင်ကြိုးစား၍ လုပ်ဆောင်ပါသော်လည်း ခရစ်တော်၏အောင်မြင်ခြင်း အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ခံစားသကဲ့သို့ သင်ခံစားဖို့ မလွယ်ကူပေ။ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိသော် လည်း မည်သို့ပင် ကြိုးစားပြောင်းလဲယူ၍ သင်လုပ်ဆောင်မရပါ။ သင်ထင်သည့်အတိုင်း သင်ဖြစ်လာ မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည်အပြစ်နှင့်ပါတ်သတ်၍ သဘောပေါက်နားလည် ရမည်ဖြစ်သည်!
ယေရှုထံချည်းကပ်ပြီး၊ “သခင်ကိုယ်တော်ဖြစ်စေလိုသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ! ကျွန်ုပ် ပျောက်ဆုံးပါတော့မယ်၊ ကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အသက်တာ အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲဖို့ မတတ်နိုင် ပါ! ယေရှုကယ်မတော်မူပါ” ဟူ၍ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါ။ ထိုသို့သင်ယေရှုကို ဖိတ်ခေါ်ပါက သင်သည် ယေရှုနှင့်အနီးကပ် အသက်ရှင်သူဖြစ်နေပါပြီ။ အပြစ်ကို သိမြင်ခြင်းသည် အသက်တာကို ပြောင်းလဲ ရာတွင် ထောက်ကူပေးသည်။
အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသော သူတို့အဖို့၊ အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်သောယေရှုခရစ်ကို ကိုးစား ယုံကြည်ဖို့ တောင်းဆိုပါသည်။ သခင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ သင့်အားတွန်းအား ပေးလိုပါသည်။ ကယ်တင်ရှင်ယေရှုနောက် အတူတကွလိုက်ဖို့ သင့်အား အားပေးလိုပါသည်! ကျွန်ုပ် တို့သည် အောင်မြင်ခြင်းဘက်တော်သားများဖြစ်ကြ၏ “ထာ၀ရဘုရား၏အကြံတော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ ပြည့်စုံလိမ့်မည်” ယေရှုကို ကိုးစားလိုက်ပါ၊ အသက်တာအသစ်ပြုပြင်ပါ။ အောင်မြင် ခြင်းဘက်၌ သင်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ ခွန်အားပေးလိုက်ပါ၏”
(၁၈၁၃-၁၈၇၇၊ ဂျွန် အိပ်ခ်ျစတော့တွန် သီကုံးသော “ယုံကြည်ပါကျူး”)။
သံပြိုင်ထပ်ဆိုပါသည်။ “ယခုယုံကြည်ပါ” အကယ်၍သင်သည် အသက်တာမပြောင်းသေးပါက မိမိ ထိုင်တဲ့နေရာကနေ ဓမ္မဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ လှမ်းကြပါ။ ဒေါက်တာ ကေကန်က ဦးဆောင်ပေးပါလိမ့် မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သီချင်းသီဆိုစဉ် ထိုအခန်းထဲသို့သွားကြပါ။
ထိုဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ သွားကြမည့်သူတို့အဖို့ မစ္စတာလီ အထူးဆုတောင်းပေးပါ။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာ ခရိုင်တွန် အယ်လ်. ချန်က ဟေရှာယ ၅၃း၁-၁၀ ကိုဖတ်ကြား ပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၇၄၀-၁၇၇၈ ခုနှစ် ဩဂတ်စတန် တောပလေဒီ သီကုံးရေးသားသော “အပြစ်ဖြေသောယဇ်” ဓမ္မသီချင်းကို “တိုင်တော်နား” ဟူသောဓမ္မသံစဉ်ဖြင့် သီဆိုသည်)။
၁။ ပထမ၊ မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)၊ (လုကာ ၁၃း၂၉)၊ (ဆာ ၂၅း၁၃)၊ (၁ကော ၁၅း၅-၈)၊ (၁ယော ၁း၁)၊ (ယောဟန် ၂ဝး၁၉-၂၀)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၀)၊ (ရောမ ၆း၁၀၊ ၉)၊ (ဟေဗြဲ ၇း၂၄၊ ၂၅)။
(ဟေရှာယ ၅၃း၁၀၊ ၄၉း၆၊ ၆ဝး၃၊ ၅၊ ၄၉း၁၂)၊ (ဗျာဒိတ် ၁၁း၁၅)၊